I-Rice / ingqolowa / ingqolowa yekhomputha yokucoca umatshini-5XFZ-15XM mveliso kunye nabenzi | Maoheng
Ngokuhlengahlengisa ukuhanjiswa kwevolumu yomoya yezikrini ezibini ezime nkqo, kusetyenziswa umgaqo wokunqunyanyiswa kwezinto, kudityaniswe nombhobho womoya ophindwe kabini ukuze ususe ukungcola kokukhanya.
Kwaye ukungcola kokukhanya okunje nge-bauxite, uthuli, kunye nemigodi kususwe ngokupheleleyo.
Ngokuhlengahlengisa ivolumu yomoya kunye nokuphakama kokungangqinelani kwendawo yokuphuma kwitafile yomxhuzulane, kusetyenziswa umgaqo wokuphamba kwezinto, ukususa imbewu yecoriander, egulayo
imbewu, isikhunta, iinkozo ezingakhuli, kunye ne-oats yeenkozo zengqolowa, isikwashi, njl.
Umatshini wokucoca imbewu
ngescreen somoya kunye netafile yomxhuzulane.
Ngokuhlengahlengisa ukuhambisa ivolumu yomoya yezikrini ezibini ezime nkqo, usebenzisa umgaqo we
ukunqunyanyiswa kwezinto, kudityaniswe nombhobho womoya ophindwe kabini ukususa ukungcola kokukhanya.
Kwaye ukungcola kokukhanya okufana ne-bauxite, uthuli, kunye neenqanawa kususwe ngokupheleleyo.
Itafile yomxhuzulane ephindwe kabini / itafile enye yomxhuzulane:
Ngokuhlengahlengisa ivolumu yomoya kunye nokuphakama kokuxakeka kwendawo yokuphuma kwitafile yomxhuzulane,
usebenzisa umgaqo wobunzima bezinto eziphathekayo, ukususa imbewu ye-coriander, egulayo
Umatshini onesakhiwo esihambelanayo, usebenza kakuhle, umthamo omkhulu, ukusebenza ngokulula kunye nokuhamba.
Lo matshini unokusetyenziswa ngokubanzi xa kusenziwa imveliso yezolimo kunye neempawu ezisecaleni.
→ Umboniso wee-engile ezininzi:
A:Singumenzi wobuchule kumatshini wokucoca iinkozo kwaye sineminyaka eli-16 yokuvelisa kunye namava okuthengisa.
Q: Yintoni ekufuneka uyazi ukuba unxibelelwano olukhawulezileyo kunye nekoteyishini?
A: Iya kuthakazelelwa kakhulu ukuba unganikezela ngeenkcukacha zezinto zakho zokulungisa izinto, amandla kunye nesicelo sokusebenza, imigaqo yesikrini, umbane wamandla ombane kunye nophawu olukhethekileyo olufunekayo, kunye nezinye iimeko zokusebenza.
Q: Ngaba oomatshini omnye banokusebenza kwiimbewu ezahlukeneyo?
A: Sikwasisebenzisa ngokukodwa, imbewu ethile kuseto koomatshini bethu ukunciphisa isikwere esingafunekiyo. Sinikezela ngezikrini zamanani ukuba zifakelwe koomatshini abodwa emsebenzini wethu kwiindidi ezahlukeneyo zembewu.
Q: Kuya kude kube nini iimveliso zithunyelwa kum?
A: Malunga neentsuku ezili-10 ukuya kwezingama-40 elwandle, kuxhomekeke kweliphi ilizwe okulo nohlobo lomatshini kunye nokufumaneka kwamalungu.
Q: Athini amagama akho okuhlawula?
A: T / T, L / C, Western Union, Imali yamkelwe.
I-30% idiphozithi ngomyalelo wokuthenga, i-70% eseleyo ihlawulwe ngaphambi kokuthunyelwa.
Egqithileyo Indlu elevator (Uhlobo phakamisa)
Okulandelayo: Itafile enye yomxhuzulane yeembotyi / umbona / ingqolowa
Zenzekelayo Corn Ukupakisha Machine
Umatshini wokuGcina i-Chestnut
Umatshini weBean Beading
Ukupakisha iKofu Umatshini
Ingqolowa Ukupakisha Machine
Umatshini wokupakisha weGranule
Umatshini wokugcwalisa Powder weGranule
Umatshini wokutshisa irayisi
Umatshini wokuPakisha weMbewu
Jongilanga Imbewu Packaging Machine
Umatshini wembotyi wembotyi ngenkqubo yokomisa into (BYHG-8)
Ezolimo zisebenzise ingqolowa yokucoca imbewu kunye ...